Burj Khalifa, မိုto်းကောင်းကင်ကိုညွှန်ပြ | ခရီးသွားသတင်း
Burj Khalifa, ကောင်းကင်သို့ညွှန်ပြ
Mariela Carril | | ဒူဘိုင်း, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ငါဟာလူသားတွေဟာကောင်းကင်ဘုံနဲ့နီးစပ်သလိုအဆောက်အအုံတွေကိုတည်ဆောက်ချင်တယ်လို့အမြဲပြောတယ် Burj Khalifa အဲဒါကိုသက်သေပြနေဆဲ ရှိသည် ၁၀ မီတာအမြင့်! ၎င်းသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်ဆောက်လုပ်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒူဘိုင်းကိုဖြတ်ကျော်။ ခရီးသွားသူတစ် ဦး မျှမရှိ။ သူသည်စွပ်စွဲထားသောလက်ချောင်းများကြောင့်တိမ်များထဲသို့ ၀ င်ရန်ကြိုးစားသည်။
ဒီအဆောက်အ ဦး ထဲမှာပါ ဒူဘိုင်း, လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့သော \_ t ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးသောအဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်းပါး၌ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဒီဇိုင်း၊ စူးစမ်းလေ့လာရေးစခန်းများအကြောင်းအနည်းငယ်လေ့လာကြပါစို့။
အမှန်တရားကတော့ကောင်းကင်မှဖြစ်စေ၊ သဲကန္တာရဖြစ်စေ၊ သင်သည်ဒူဘိုင်းသို့ချဉ်းကပ်သောအခါသင်၏မျက်လုံးများကိုချက်ချင်းဖမ်းယူလိုက်ခြင်းသည်မိုးခေါင်ခြင်းနှင့်ထိုရွှေမိုးများမှမိုးမျှော်တိုက်များသည်မည်သို့ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းမြို့တော်သို့ရောက်သောအခါ၎င်းတို့သည်အလွန်ခိုင်မာကြောင်းသင်သဘောပေါက်လာသည်။
ဒူဘိုင်း၏မိုးမျှော်တိုက်များသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပုံဆောင်သည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်တစ်ခုကပင်ထိုမြေ၏ကြီးထွားမှုနှင့်တိုးတက်မှုသည်လူမျိုးစုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးသောအဆောက်အ ဦး ဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ Burj Khalifa၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးဟိုတယ်ဖြစ်သည်, 355 မီတာနှင့်အတူ JW Marriot Marquis ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးလူနေအိမ်မျှော်စင်ndo, မင်းသမီးမျှော်စင်, 413 မီတာ။ ငါအဲဒီမှာကြမ်းပြင်အဘို့အသေခံ, လူကြီးလူကောင်း။
သို့သော်အာရပ်များသည်သူတို့၏ရေနံချက်စက်များနှင့်အတူမထိုင်ဘဲ ၂၁ ရာစု၏ဤဒုတိယဆယ်စုနှစ်မကုန်မီတွင်သူတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ထားကြသည်။ ယခုအမည်အား The Tower ဟုခေါ်တွင်သောဆိပ်ကမ်းနှင့် Burj Khalifa ထက်ပိုမိုမြင့်မားသော ဟိုတယ်။ လေ့လာရေးကုန်းပတ်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်း ၎င်းတွင်အမြင့် ၁၅၀ မြင့်သောအဆောက်အ ဦး များစွာရှိပြီးဟောင်ကောင်နှင့်နယူးယောက်တို့တွင်တတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ ၏အဆောက်အ ဦး များနှင့်စပ်လျဉ်း မီတာ 300 ကျော်ကနံပါတ်တစ်ဖြစ်ပါတယ်, 18 ရှိပြီးသားနှင့် 10 ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်ဒီသဘောအရဒါဟာမန်ဟက်တန်, ဟောင်ကောင်နှင့်ချီကာဂိုထက်သာလွန်။ မြို့၏လူ ဦး ရေသည်အဆတိုးများလာမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ထို့ကြောင့်မျှော်စင်အများစုသည်လူနေအိမ်များဖြစ်သည်။ ထက်ဝက်ကျော်သာရှိသည်။ နောက်တွင်လူနေအိမ်များကိုရုံးများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအဆောက်အ ဦး များဖြစ်သည်။
ကျနော့်အမြင်မှာတော့ဒီအမြင့်ဆုံးအကြောင်းအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခု skyline ဒူဘိုင်း၏အဆောက်အ ဦး များ၊ cobi သောယဉ်ကျေးမှု၏ကွဲပြားထိရှိသည်ဒီဇိုင်းနှင့်ပြင်ပအလှဆင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်၊
ဤအောင်မြင်မှုများကိုဗိသုကာပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ လူ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုကိုတန်ဖိုးထားရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းမှာ၊ ရှိတ်ဇေဒေးလမ်း၊ စီးပွားရေးပင်လယ်အော်နှင့်အတိတ်ကအဏ္ဏဝါသို့သွားရန်ဖြစ်သည်။
ကြည့်ပါ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမြင့်ဆုံးအဆောက်အ ဦး။ Uber မှထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွား the ည့်နေရာများစာရင်းတွင်နံပါတ် ၆ နေရာတွင်ရှိသည်။ ဒီစာရင်းကိုဒီလျှောက်လွှာ၏ယာဉ်မောင်းမှအများဆုံးတောင်းဆိုထားသောနေရာများနှင့်အညီပြုစုသည်။
အဘယ်အရာကို အခြားမှတ်တမ်းများ ငါတို့လှပသောသတ္တဝါကိုရိုက်နှက်သလော ကောင်းပြီ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးအဆောက်အ ဦး ဖြစ်တာအပြင် ၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးရပ်တည်သောအဆောက်အ ဦး ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အထပ်များနှင့်အထပ်များများ၊ ပြင်ပတွင်လေ့လာရေးကုန်းပတ်များနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှည်ဆုံးသောဓာတ်လှေကားများရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဆောက်အ ဦး ၏ဆောက်လုပ်ရေး 2004 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည် အပြင်ပန်း က 2009 ပြည့်စုံခဲ့သည်။ အရိုးစုကိုအားဖြည့်ကွန်ကရစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကို One World Trade Center ကဲ့သို့တူညီသော Skidmore, Owings & Merrill ကုမ္ပဏီမှဗိသုကာ Adrian Smith ကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီဇိုင်းသည်အစ္စလာမ်၏လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းစီစဉ်ထားသည်။ တူးဖော်ခြင်း၊ တိုင်များနေရာချထားခြင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်အထပ် ၁၀၀ နှင့် ၂၀၀၈၊ inပြီလတွင် ၁၆၀ ထပ်သို့ရောက်ရန်အပေါ်ယံလွှာနှင့်ကြမ်းပြင်မှတစ်ထပ်မြင့်ခြင်း။
ကြမ်းပြင် ၈ မှ ၃၈ နှင့် ၃၉ အထိ Armani ဟိုတယ်ဒူဘိုင်း, ဒါပေမယ့်9ကနေ 16 အထိဇိမ်ခံအိမ်များနှင့်အိပ်ခန်းနှစ်ခုသာပါသော Armani Residences သာရှိပါသည်။ ၄၅ မှ ၁၀၈ အထိအဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံသီးသန့်အိမ်ရာများရှိသည်။ Corporate Suites သည်ကျန်ထပ်အထပ်များတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ၁၂၂ ထပ်တွင်ထပ်မံသီးသန့်နေအိမ်များရှိသည်။ အများပြည်သူစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုသည် ၁၂၄ ထပ်တွင်ရှိသည်။
မျှော်စင်ကိုကြမ်းခင်း ၄၃၊ ၇၆ နှင့် ၁၂၃ တွင်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပါ ၀ င်သောအထပ် ၄၃၊ ၇၆ နှင့် ၁၂၃ တွင်သီးသန့် l ည့်ခံခန်းများရှိသောအခန်းများအဖြစ်ခွဲထားသည်။ ။ အပြင်ဘက်မှာရေကန်နှစ်ခုဖွင့်ထားတယ် ဒါကြောင့်မင်းကအတွင်းထဲကိုစပြီးသင်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်။
အတွင်းပိုင်းအလှဆင်မှုများကိုတူညီသောဗိသုကာကုမ္ပဏီမှပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာကျော်ဒီဇိုင်နာ Nada Andric ကစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်သံမဏိ၊ ဖန်၊ ပွတ်နက်သောကျောက်ခဲများ၊ travertine စကျင်ကျောက်ကြမ်းပြင်များ၊ နံရံပေါ်ရှိဗင်နီဇွဲလားတုတ်တုတ်များနှင့်အခြားအရာများရှိသည်။ ဒေသခံနှင့်ကမ္ဘာကိုအနုပညာပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဒီနေရာမှာဘယ်လိုနေရလဲဆိုတာကတော်တော်စျေးကြီးတယ်။ လူသေတွေဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောကြရအောင် ၅၅၅ မီတာမြင့်သောလေ့လာရေးကုန်းပတ်သို့လာရောက်ပါ, ကြမ်းပြင် 148. တွင်။ ဤတွင်သင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည် ထုံးစံခရီးစဉ် Am ည့်သည်သံအမတ်၏လက်ထဲတွင်ရှိပြီးအထပ် ၁၂၅ နှင့် ၁၂၄ သို့မဆင်းမီ SKY Lounge တွင်ကျန်ရှိသောအချိုရည်တစ်ခွက်ကိုသောက်သုံးပါ။ ဤခရီးစဉ်သည်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
ဒီခရီးစဉ်ကိုခေါ် ထိပ်တန်းက Sky မှာ ၎င်းကို AED 370 နှင့် AED 380 မှ Dubai Fountain Boardwalk မှထပ်တူထပ်မံစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ထိပ်မှာ Burj Khalifa သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်မျိုးရှိသည်။ ၁၂၄ ထပ်သို့မဟုတ် ၁၂၅ ထပ်။ ပထမတွင်နှစ်ထပ်ဓာတ်လှေကားများရှိသည်။ တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၀ မီတာတက်လျှင်အလွန်ကြီးသောတယ်လီစကုပ်များရှိပြီးအပြင်ဘက်တွင်ကျန်ရှိသည်။ ဒုတိယကတော့မင်းဟာအာရပ်စတိုင်နဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ၄၅၆ မီတာရှိတယ် 360ºအမြင်များ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်သည်ပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ် တစ် ဦး ကစွန်ငှက်၏မျက်လုံး မြို့အနှံ့ပျံ့နှံ့နိုင်ခြင်း၊ chroma အစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဓာတ်ပုံများကိုအတူတကွစုစည်းနိုင်ပြီးမြင့်မားသောအတွေ့အကြုံများကိုခံစားနိုင်သည်။ မှန်ဖန်ခွက်ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့တက်လှမ်းနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ။ တကယ်ရူးလိုက်တာ!
ဒါပေမယ့် မြှင့်တင်ရေးရှိပါသလား? ကောင်းပါပြီ၊ သင် At the Top အတွေ့အကြုံကို Mission 828 VR နှင့်ထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အဆောက်အအုံ၏ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်သွားပြီးလေထီးခုန်နှင့်အတူလိုက်ပါသွားသော virtual reality အတွေ့အကြုံ။ စျေးနှုန်း? 174 AED ကနေ။ ထို့အပြင် Front of House ဟုခေါ်သောအခြားအရောင်းမြှင့်တင်မှုတစ်ခုလည်းရှိသော ၈၀ AED မှ Dubai Opera House သို့လှည့်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ဒူဘိုင်း » Burj Khalifa, ကောင်းကင်သို့ညွှန်ပြ